नयाँ वर्षमा घुमघाम
गण्डकी प्रदेशमा पर्ने मुस्ताङ्ग जिल्ला संसारकै अति प्रचलित आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य स्थल हो । हिमाली सौन्दर्यता यहाँ को मुख्य विशेषता हो । सडक मार्गबाट जाँदा देखिने सुन्दर झरना र सुन्दर प्राकृतिक मनोरम दृष्यले जो कोहीको मन लोभ्याउछ । जोमसोम देखि माथी प्रसिद्ध तिर्थ स्थल मुक्तिनाथ मन्दिरका कारण पनि हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीहरु यस मन्दिरमा पुग्ने गर्छन । यसका अलावा कागबेनी धाम पनि पवित्र तिर्थ स्थल हो । हिमाली जिल्ला मुस्ताङको राजधानी जोमसोम र त्यहाँ रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर विश्वभर चर्चित रहेको छ । वर्षेनी लाखौं हिन्दू र बौद्धधर्मालम्बीहरु यहाँ पुग्ने गर्छन । यहाँको प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि लाखौं पर्यटकहरु जोमसोम पुग्ने गरेका छन् ।
पोखरा एक हिसाबले नेपालको पर्यटकीय राजधानी नै हो । एकै स्थानमा ताल, हिमाल, मन्दिर, गुफा अवलोकन गर्न सकिन्छ पोखरामा । यसका साथै साहसिक खेलहरु प्याराग्लाइडिङ, बन्जी, जिप फ्लायर लगायत दर्जनौं गतिविधि हुने भएकाले पनि यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय राजधानी भन्ने गरिन्छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने यो स्थान विभिन्न पदमार्गको प्रवेशद्वार पनि हो । अन्नपूर्ण, माथिल्लो मुस्ताङ, पुनहिल लगायत पदमार्गको प्रवेशद्वार पोखरा हो ।
नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो, सौराहा । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सौराहा वाइल्ड लाइफ पर्यटनमा विश्वमै चर्चित रहेको छ । यहा वर्षेनी लाखौं स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरु पुग्ने गर्छन् ।
यहाँको आकर्षण भनेको नेवारी वस्ती र सुन्दर दृश्यावलोकन नै हो । यहाँबाट तनहुँको सुन्दर फाँटहरु, हिमाल लगायतका दृश्यहरु हेर्न पाइन्छ । वातावरणका हिसावले पनि यो ठाउँ उत्तम रहेको छ ।
बागलुङ जिल्ला नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र धवलागिरी अञ्चलमा अवस्थित एक पहाडी जिल्ला हो। यो जिल्लाले झोलुङ्गे पुलको जिल्लाका रूपमा पनि अर्को चिनारी बनाएको छ। नेपाल भित्रको सानो नेपाल नामले परिचित बागलुङ जिल्ला पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने प्राकृतिक रूपले चिटिक्क परेको सुन्दर पहाडी जिल्ला हो।बाग्लुङ्ग जिल्लाको सदरमुकाम वा.न.पा. स्थित कालिका देवी मन्दिर अवस्थित छ । धार्मिक पर्यटनका हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको भगवति कालिका देवी मन्दिर वनको माझमा रहेको छ । प्राय सालहरुको रुखले ढाकेको यो क्षेत्र पूर्वमा कालिगण्डकी, पश्चिममा काठेखोला, उत्तरमा धौलागिरी हिमाल देखिने र दक्षिण क्षेत्र बलेवा पर्दछ ।
नेपालदेखी भारत क्षेत्रसमेत चर्चामा आउन सफल यो पवित्र धाममा भगवती कालिका देवी मन्दिर पुग्न भव्य प्रवेशद्वारबाट करबि ८÷१० मिनेटको पैदल दुरी पर्दछ । सो बाटो फराकिलो चौडा भएकोले आगमन सहज बनाएको छ । मुल प्रवेशद्वारसँगै बाटोको दयाँबायाँ अव्यवस्थित वनक्षेत्र घना देखिन्छ । वन क्षेत्रले नै कालिका देवी शक्तिको लौकिक क्षमता कम भएको प्रतिक हुन्छ ।
यहाँ पुग्नको लागि पर्यटक हरु गाडिमा भन्दा पैदल मानै जाने गर्छन्। यो ठाउँ अझ फ्लिम सुटिङ्को लागि निकै प्रसिद्ध छ। यस गाविसमा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू धम्पुसकोट, भुमे मन्दिर, नेवोताल वराह, सिद्घवराह मन्दिर आदि रहेका छन भने पाराग्लाईडिङको लागि थाक डाँडा, तप्राङ मैदान आदि प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरू हुन।
अधिकांश पर्यटक माछापुच्छे्र हेर्न पोखरा जान्छन्। तर, माछापुच्छे्रको असली दृश्यावलोकन गर्ने हो भने धम्पुसजस्तो राम्रो ठाउँ अरू कुनै छैन। माछाको पुच्छर आकारको टुप्पो भएकाले यसको नाम माछापुच्छे्र भएको हो भनेर तपाईंले पढ्नुभएकै होला, धम्पुस जानुस् देख्नु पनि हुनेछ।
धम्पुस पुग्न सजिलो छ, पोखराबाट जम्मा २५ किलोमिटर पश्चिम। पोखराको बाग्लुङ बसपार्कबाट बाग्लुङ जाने बस छुट्छन्। यहाँबाट सार्वजनिक बस समातेर वा ट्याक्सी लिएर आधा घण्टामै फेदी पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट शुरु हुन्छ, जङ्गलले घेरा हालेको उकालो बाटोमा पदयात्रा। छिटो हिँड्नेलाई एक घण्टा, ढिलो हिँड्नेलाई दुई घण्टा, त्यसपछि आइहाल्छ( गन्तव्य धम्पुस ! धम्पुसबाट देखिने हिमालमात्र होइन, पोखराबाट फेदीसम्म गाडीमा यात्रा गर्दा देखिने फाँट, खोलाहरू पनि कम मनमोहक छैनन्। फेदीमा भएका होटलहरूमा सजाएर राखिएका सुकुटी देख्दा नखाई बस्नै सकिँदैन। डाँडा पुग्नासाथ शुरु हुने धम्पुसका होटल, सफावस्ती र स्वागत गर्न बसिरहेका धम्पुसबासीको व्यवहारले पर्यटकलाई यसरी लोभ्याउँछ कि एक रातका लागि जानेलाई पनि बसाइँ लम्ब्याउन मन लाग्छ। रात बस्न धम्पुसमा सफा, सुग्घर र सस्ता होटलहरू पाइन्छन्।